विषय समतल Nipples, र को संभावना स्तनपान यस मामला मा, सधैं चर्चा अन्तर्गत आउँछ। यो समस्या सामना पहिलो पटक, तिनीहरूले आफ्नो बच्चा पूर्ण स्तनपान दिन सक्षम हुनेछ कि चिन्ता गर्ने युवा आमा, - यो बुझ्ने हो? विकल्पहरू प्रशिक्षण रुचाउने प्रक्रिया को लागि समतल Nipples धेरै छ - यो एक मालिश, विशेष कंडीशनर छ। यस्तो मामला मा जवान आमा के, अहिले बाहिर पाउन।
समतल Nipples कुनै दण्ड
सबैभन्दा विशेषज्ञहरु पक्का हो Nipples हुन्छन् वा समतल आकार, केही गम्भीर छ। समस्या छ कसरी जरुरी निर्धारण, यो एक सरल तरिका सम्भव छ। बिस्तारै औंठी र forefinger बीच areola squeeze गर्न। निपल सामान्य फारम, अगाडी बाहिर थिचिएको समतल - अपरिवर्तित रहनेछ। अक्सर यो फरक छाती मा Nipples पनि dissimilar कि हुन्छ। वा समतल समातिए - एक बिल्कुल, सामान्य दोस्रो हुन सक्छ। सबैभन्दा स्तनपान यो उल्टो Nipples रोक्न। तर तिनीहरूले महिलाहरु मा अत्यन्तै दुर्लभ छन्। र अझै - बाह्य भ्रममा छैन निपल को उपस्थिति खुवाउने गर्दा र यसको वास्तविक रूप। हामी आफ्नो औंलाहरु (चूसने बच्चा दूध को ओठ संग तुलना) को प्रयोग गरेर सिफारिस किन यसको वास्तविक प्रकार स्थापित छ।
बच्चाहरु को रुचाउने कस्तो छ?
समतल निपल - एक गैर मानक छाती को उदाहरण विचार गर्नुहोस्। कसरी यस्तो मामला मा आफ्नो बच्चाहरु खुवाउन? पहिले समतल मा प्रक्रिया नै बुझ्न छ। यो आवश्यक प्रत्येक आमा जान्नुपर्छ - बच्चा areola देखि खान्छ। र निपल मात्र सहज पकड ओठ छाती मद्दत गर्छ।
बच्चालाई suckling निपल खींचती समयमा - यो सही आकार र आकार लिन्छ। को बच्चा पहिलो पटक देखि स्तन लिन सक्छ भने नआत्तिनुहोस्। यो अन्त गर्न हामी एक पुरा सिस्टम रुचाउने विधिहरू जो द्वारा बच्चा उहाँले गर्नुपर्छ कसरी र के बुझ्न विकास गरे। र अधिक। कुनै मामला मा निरुत्साहित गर्न सकिँदैन: फ्लैट, उल्टो Nipples - यो केही हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मा ट्युन गर्न एउटा कारण छैन। सबै सही मनोवृत्ति मा निर्भर गर्दछ। हामी समस्या अवस्था बाहिर तरिका खोज्न भने, त्यो पत्ता लगाउन निश्चित छ।
वर्तमानमा, त्यहाँ स्तनपान लागि यो तयार शरीर को यो भाग को आकार परिवर्तन गर्न योगदान धेरै विधिहरू छन्। उदाहरणका लागि, छैन त लामो पहिले वितरण समतल निपल पुल मदत, एक धेरै लोकप्रिय अभ्यास थियो। तर, यो समय यो प्रविधी एक ठूलो प्रभाव उत्पादन गर्दैन स्पष्ट भयो। विशेषज्ञहरु उल्लेख रूपमा, prenatal निपल आकार संलग्न परिवर्तन, भविष्यमा आमा कक्षाकोठामा बिताएको समय, तिनीहरूलाई विरुद्ध सीधा काम। को शारीरिक परिवर्तनहरू राम्रो तरिका अवलोकन भने, महिला को मनोवैज्ञानिक राज्य प्रत्येक वर्ग संग worsened। र जन्म दिने पछि पनि, महिला केही एकैचोटि बोतल को सेवाहरूमा पनि उनको बच्चा खुवाउन कम्तिमा एक पटक प्रयास गर्न bothering छैन resorted।
जन्म पछि, प्रत्येक दोस्रो आमा यो कारण विद्यमान विकृति गर्न स्तन छैन खुवाउनुभयो गर्न सक्ने बच्चा केही थियो। र पहिलो प्रयास सबै एक महिला डर थियो स्तन दिन दोस्रो पटक बाहिर गरिएका पनि भने, कि विफलता लागि प्रतीक्षा बारेमा आउन थियो।
त्यसैले के त्यो समतल निपल छ भने एक महिला गर्नुपर्छ? कसरी पहिलो पटक एक बच्चा खुवाउन? मुख्य कुरा - बच्चालाई आफ्नो ओठ कसरी पकड लिन्छ ध्यान ट्र्याक छ। को छाती समतल वा उल्टो छ भने पनि, त्यो माध्यम सहज क्रिया पुल हुनेछ। - निपल को अनियमित आकार लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय राम्रो sucking, संवेदनशील बच्चा: डाक्टर भन्न रूपमा। तुरुन्तै postpartum गर्नुपर्छ स्तन लिन आफ्नो बच्चाहरु सिकाउनुहोस्। colostrum को सुनिंनु जब (र दूध पछि, र) निपल को समतल बढ्छ। र यो, पाठ्यक्रम, अझ रुचाउने प्रक्रिया जटिल। तपाईं एक सामान्य सलाहकार मदत खोज्न सक्नुहुन्छ। पहिलो रुचाउने लागि तयारी व्यक्तिगत प्रत्येक महिला संग बाहिर छ। उनको विशेषज्ञहरु समयमा मात्र के हामीलाई भन्नुहोस्, तर पनि कसरी Nipples काम गर्न सिक्न: मालिश, पुल, peripapillary सर्कल लागू हुन्छ।
यो ठूलो महत्त्व बच्चालाई सही स्थिति छ भनेर थाह महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले आफ्नो काखमा सहज छ भने, त्यसपछि उहाँले धेरै छिटो गर्न सक्छन् निपल लो।
"कुकिङ" आफूलाई निपल
स्तन लिन र आफ्नो मा हुन सक्छ पहिलो पटक आफ्नो बच्चा मदत गर्न। खुवाउने गर्दा समतल Nipples एक सानो खींच हुनुपर्छ। areola को स्तन वरिपरि आफ्नो औंला यो गर्न: - चार र शीर्ष मा - तल्लो आफ्नो औंठी संग। छाती बलियो निचोड हुन र साथ को छाती तिर यो मोड्नु पर्छ। यो प्रविधी टाढा अगाडि निपल धक्का हुनेछ। एक मांसल सानो केटा स्तनपान थाह रही धेरै उपयोगी छ। तपाईं पनि एक विशेष सिलिकन प्याड, को sucking सहज क्रिया को विकास गर्न योगदान गर्नेछ जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, यो लागू गर्न पहिलो पटक अझै पनि आदिवासी परामर्शदाता को नेतृत्व अन्तर्गत खडा। इस्पात स्तनपान अर्को साधारण र प्राप्त लोकप्रियता।
एक स्तन पंप के राम्रो छ?
र यो राम्रो छ एक बिजुली स्तन पंप उच्च गुणवत्ता चाँडै यसलाई इच्छित आकार दिने, निपल पुल मद्दत गर्छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो पूर्ण रूपमा चोट छैन। समतल निपल बाहिर झिकेर गर्न सकिन्छ र साधन हात मा। 10 क्यूबिक सेन्टिमिटर यस लिएको सिरिंज मात्रा लागि। बारेमा लगभग 1 सेन्टिमिटरले: को सुई भाग को बन्द कट देखि। परिणामस्वरूप ट्यूब पिस्टन सम्मिलित छ। यो पनि सिरिंज को प्राप्त लम्बाइ मा काटियो छ। एक पिस्टन को छोट्याउन पक्ष संग सम्मिलित गर्न, र सिरिंज को बिना खतना भाग दृढ को areola गर्न थिचिएको। निपल निकाल्दै आवश्यक सजिलै, jerks बिना धेरै ध्यान छ।
यस्तै प्रक्रिया यसरी निपल फैलयो किनभने लामो आफ्नो नयाँ आकार पकड छैन, सीधा खुवाउने अघि बाहिर छ।
को छाती मा पैड प्रयोग
त्यसैले, एक महिलाको समतल निपल। के तपाईं एक स्तन पंप खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने? तपाईं छाती लागि विशेष पैड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले देखि उच्च गुणवत्ता प्लास्टिक गरे र दुई मुख्य भागहरु समावेश छन्। पछाडि एक निपल सम्मिलित जसमा एक प्वाल बनाइएको छ। अगाडि अन्त laths semicircular छ। यो आदर्श कुनै पनि ब्रा गर्न अनुकूल छ। Areola यो पट्टी पालना र ब्रा यसको दबाव छाती बिस्तारै Nipples खींच गर्न मद्दत गर्छ। ओभरले लागि ध्यान दिएर अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रत्येक राम्रो न्यानो Soapy पानी धोए खुवाउने पछि र दूध को बाँकी थोपाहरूद्वारा उपस्थिति लागि जाँच गर्न निश्चित हुन। तपाईँले किन्न जब पैड को आकार ध्यान गर्नुपर्छ - तिनीहरूले ठूलो (क्षतिग्रस्त Nipples लागि), र साना (समतल र उल्टो लागि) छन्।
गर्भवती महिला चासो अर्को बिन्दु एक ठूलो समतल छाती छ। एक स्तन Nipples माथि वर्णन विधिहरू विकास, तर जब खुवाउने खाता धेरै nuances मा लिनुपर्छ। मेरो आमा बच्चालाई खुवाउन थियो जब, त्यो तिनीहरूलाई सकेसम्म जफती रूपमा सजिलो उचाल्न गर्न छाती डायपर वा तौलिया अन्तर्गत राखिएको थियो।
यसलाई हात द्वारा स्तन, यो कठिन बच्चा र यति सजिलो काम बनाउने, वजन धेरै तल आउनुहुनेछ किनकी पकड गर्न सम्भव छ। यो आवश्यक छैन बच्चालाई गर्न दुबला छ। राम्रो विपरीत फिर्ता सीधा सकेसम्म धेरै फिर्ता दुबला। र पाठ्यक्रम, यो सधैं सुत्केरी आमा को स्तनपान अवधि पछि droop छैन स्तन मदत गर्न लागि ब्रा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। धेरै स्तनपान महिला पनि भन्ने उल्लेख ठूलो बस्ट धेरै कम हुन्छ - को lactation अवधि पछि एक सम्पूर्ण नयाँ फारम लाग्छ।
समतल Nipples - यो एक वाक्य छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम सही स्तन समातेर आफ्नो बच्चा सिकाउनु हो। विधिहरू पैड द्वारा रुचाउने को हप्तापछि स्तन पंप र अभ्यास महिला त्यो अब आवश्यक कुनै कुरा मा याद हुनेछ।
अक्सर निपल लिन जो बच्चा, पहिले नै स्वतन्त्र इच्छित आकार र आकार यसलाई खींचती। हामी एक महिला सही अनिश्चित छाती गर्न accustomed बच्चालाई लागि यसको भाग गरिरहेको छ भने, प्रतिक्रिया बच्चा सम्भव सबै गर्न भनेर थाहा हुनुपर्छ। र अझै - अक्सर ध्यान दिएनौं नर्स कि समतल वा उल्टो Nipples डर छ। र आवश्यक जटिल खुवाउने। यो आवश्यक छैन काम प्रयास बिना शब्दहरू विश्वास छ। केवल आमा आफु आफ्नो बच्चा, आफ्नो ओठ एक पोषित आमाको दूध संग areola clasping, "लक्ष्य" सान्त्वना हुनेछ, जो उनको निपल सकेसम्म टाढा यसलाई झिकेर सकिन्छ गठन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। कहिल्यै स्तनपान मा दिन्छ। यो इच्छा थियो - कुनै पनि समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
मांसपेशिहरु अन्तर्गत mammoplasty पछि पुनर्वास: अवधि को अवधि, समीक्षा
किन दुखेको clitoris
कसरी आफ्नो हातमा एक बालकनी ढाक्नु गर्न सिफारिसहरू
किन formband interlining प्रयोग गर्ने?
व्यक्तिगत जीवन र जीवनी Alsou
"Avizor" लेंस लागि समाधान: आवेदन र मर्यादा को नियम
नाउ मोटर्स: समीक्षा, समीक्षा, सुविधाहरू, मूल्यहरु
विद्यार्थीहरूको लागि गिरावट बारेमा मिनी-निबंध
अखंड जग स्लैब - दिगो घर को लागि एक आधार!